जिम्मेवारी कसले लिने ? | Himalkhabar.com
गृहपृष्ठ » जिम्मेवारी कसले लिने ? जिम्मेवारी कसले लिने ?
राजनीतिक अस्तित्व कायम गर्ने दलहरुबीचको लडाइंको मारमा निजी क्षेत्र परेको छ । देशको विभिन्न स्थानमा जारी कयौ दिन लामो बन्दका कारण उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन ठप्प छ । उद्योगको कच्चा पदार्थसमेत ल्याउन सकिएको छैन, जनता घरभित्रै थुनिनुपर्ने स्थिति छ । तर, राजनीतिक दलहरु अकर्मण्य छन् । प्रदीपजंग पाण्डे
शनिबार , १३ जेठ २०६९ १२:२९ पम
सरकारलाई जनताले दुःख पाएको थाहा छ, तर समस्या समाधानका लागि पहल गर्दैन । दलहरु आपसी विवादमै अल्झिएका छन् । आजकाल यस्तो लाग्न थालेको छ– आखिर यो देश कसको हो ? किन कोही पनि जिम्मेवारी लिंदैनन् ? देश महिना दिनसम्म ठप्प हुँदा प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? उद्योग व्यवसाय क्षेत्र रहने आधार झन् कमजोर भएको छ । यो भयावह स्थितिमा सुधार भएन भने एक वर्षभित्र एक तिहाई उद्योग बन्द हुने निश्चित छ । चर्को लोडसेडिङ, मजदुरको थेग्नै नसक्ने माग, चन्दा आतंक, असुरक्षा कायम भयो भने भएका उद्योग पनि थला पर्नेछन् । अहिलेसम्म निजी क्षेत्र निराशाका बीचमा पनि आशा बाँडेर बसेको थियो, अब भने आफैं निराश हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
सरकार र राजनीतिक दलले सपना र योजना मात्र बाँडेर देश आर्थिक उन्नतिको दिशामा जाँदैन । सरकारले घोषणा गरेको लगानी वर्ष सन् २०१२÷१३ असफल हुने निश्चितप्रायः छ । यस्तो अस्थिर वातावरणमा स्वदेशी र विदेशी कुनै पनि लगानीकर्ताले थप लगानी थप्ने जोखिम उठाउँदैनन् । सरकारले आफ्नै आधारभूत काम त गर्न सकेको छैन, लगानीको वातावरण कसरी बनाओस् ? आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि विकासको रकम आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण, श्रम कानुनमा सुधार, उद्योग मैत्री नीति निर्माण तथा लगानीको वातावरणमा सुधारका योजना अलपत्र परेका छन् । अहिले सबैलाई अधिकार चाहिएको छ । संविधानको पोका खोल्दा सबैले एक– एक पुरिया पाउने आशा राखेका छन् । तर, त्यो नभएपछि आक्रोश झन् बढ्ने निश्चितप्रायः छ । देशको संघीय संरचनाको प्रारूप, सीमांकन बाँकी नै छ । संघीय संरचनाको आर्थिक आधार के हुने ? स्रोतको बाँडफाँड कसरी हुने भन्ने अन्योल कायम छ । यस्तो बेला देशको अर्थतन्त्रको आधारहरु उत्पादनमूलक क्षेत्र, सेवा क्षेत्रजस्तै पर्यटन, बैंकिङ आदिसमेत थला पर्दैछन् । सहमतिको संविधान बनेर राजनीतिक स्थायित्व भए पनि व्यावसायिक वातावरण तयार हुन अझै दुई वर्ष लाग्छ । त्यति बेलासम्ममा देशको औद्योगिक क्षेत्र तहसनहस भइसकेको हुनेछ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष पाण्डेसँग हिमालखबरका लागि रमेशकुमारले गरेको कुराकानीबाट ।)
Yi VAT mara chor haru ko ke gaf sunnu. Band le desh lai pafeko noksani bhanda aafno byapar ko ghata nafa jodne chor haru …
माथिल्लो त्रिशुली ३ ‘ए’ को क्षमता विस्तारको निर्णय फिर्ता
डलर हालसम्मकै महङ्गो
दश महिनामा दुई खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा
आर्थिक वर्ष नसकिदै वीरगञ्ज भन्सारको राजश्व लक्ष्य पुरा
वैदेशिक रोजगारमा जानेक्रम बढ्दो